Muxuu tababare Klopp ka yiri xaaladda dhaawac ee Van Dijk? – Garsoore Sports
Muxuu tababare Klopp…
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku tilmaamay baxnaaninta Virgil van Dijk mid ‘rajo leh’, isagoo aan sheegin waqtiga rasmiga ah ee daafacan kasoo uu kabanayo dhaawaciisa.
Van Dijk ayaan u safan kooxda Reds tan iyo markii uu soo gaaray dhaawac jilibka kaddib markii uu tartan kala kulmay goolhayaha kooxda Everton Jordan Pickford bishii Oktoobar ee sannadkii kulankii Merseyside derby.
Dhaawacaas oo u muuqday mid halis ah ayaa la filayay inuu seejin kari inta badan xilli cayaareedka, balse jamaahiirta ayuu uga farxiyay muuqaal uu bartiisa bulshada ku wadaagay isaga oo kubbad moolleeynaya.
Kooxda Liverpool ayaanan weli shaacin waqtiga saxda ah ee la filan karo soo laabashada daafacooda ugu fiican.
Tababare Jurgen Klopp ayaa mar wax laga weydiiyay waxa uu ku jawaabay “Ma garanayo waxa suurtagal ah iyo wixii aan suurtagal ahayn; Uma maleynayo inaan ahay qofkii saxda ahaa ee go’aamin kara boqolkiiba boqol, ”
“Xaqiiqdii wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan. Taleefanka ayaan kula hadlayay subaxnimadii maanta, runtii xaaladdiisa waa wanaagsan tahay. Marka waa wax aad u rajo badan. Laakiin ma ogi goorta uu soo laaban doono.”